सलमानको जेल यात्रादेखि रिहाईसम्म ….. | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ चैत्र २०७४, सोमबार १५:४५ लेखक नेपालीजनता
काठमाडाैँ । हरिण शिकार गरेको अभियोगमा भारतको जोधपुर केन्द्रीय कारागारमा २ रात बिताएपश्चात् बलिउडस्टार सलमान खान शनिबार जमानतमा रिहा भएका छन्।
सन् १९९८ मा कालो हरिण मारेको आरोपमा सलमानलाई गत बिहीबार ५ वर्षको सजाय सुनाइएको थियो। जेलका अधिकारिक सूत्रलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जनाइएअनुसार अतालतले सलमानको जमानत याचिका मञ्जुर गर्ने आदेश दिएपछि सलमान ५० हजार रुपियाँको निजी मुचुल्का, त्यतिकै राशीको २ जमानत तथा अदालतको मञ्जुरीबिना विदेश जान नपाउने सर्तमा रिहा भएका हुन्। समाचारअनुसार याचिकामाथि अगामी सुनुवाई ७ मेमा हुनेछ। जुन दिन सलमान आफैं अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।
शनिबार साँझ ५ बजेर ३५ मिनेटमा रिहा भएका सलमानलाई लिन उनको बहिनी अलविरा र अर्पिता तथा सुरक्षा गार्ड शेरा पुगेका थिए भने उनका उत्साहित प्रशंसकको साथमा मिडियाकर्मीको भीड लागेको थियो। प्रहरीलाई सलमानका प्रशंसक सम्हाल्न र उनको वाहन निकाल्न निकै कसरत गर्नुपरेको थियो। उनका फ्यानले आफ्नो साथमा केही पोस्टर पनि लिएर आएका थिए। जसमा सलमान जिन्दावाद, सलमान तिमी संघर्ष गर, हामी तिम्रो साथमा छौं जस्ता नारा लेखिएको थियो।
५२ वर्षीय सलमानलाई कडा प्रहरी सुरक्षामा एयरपोर्ट लगिएको थियो। जहाँबाट एक चार्टड विमान चढी मुम्बईको शान्ता क्रुज एअरपोर्टका लागि उडान भरेका उनी राति ८ बजे बान्द्रास्थित आफ्नो ग्यालेक्सि अपार्टमेन्ट पुगेका थिए। त्यहाँ उनका शुभचिन्तक आफ्नो खुसी व्यक्त गरिरहेका थिए। उनले त्यसपश्चात् कालो रङको टिसर्ट र जिन्स पहिरिएर आफ्ना पिता सलिम खान, भान्जा अहिल र शेराको साथमा बलकोनीमा उभिएर हात जोड्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।
कूटनीतिज्ञहरुसँग छलफल गर्दै ओली सरकार
काठमाडौं । सरकारले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग आज शुक्रबार छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा…
काठमाडाैं । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई लिन सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएको छ । हेलिकोप्टर जुम्ला पुगिसकेको छ…
भाग्यशाली महिलाहरूको कुन कुन अंग ठूला हुन्छन्, जानी राखाैं ?
जानीराखौँ ! भाग्यशाली महिलाहरूको यी अंग ठूला हुन्छन्
महिलाहरूको हरेक अंगमा उनीहरूको कुनै न कुनै रहस्य लुकेको हुन्छ । महिलाहरूको…
दुई दिनमै कालोपत्रे उप्कियो
बुटवल । असारे विकासका खबरहरू देशभरबाट आइरहेका छन् । पानी पर्न सुरु हुनासाथ सुरु भएका असारे विकास काम सम्पन्न…
समाज सेवा गर्न नेपाल फर्केका ब्रिटिस–लाहुरे जुवा तासको लतले बने कङ्गाल
काठमाडौं । पुर्ख्याैली घर म्याग्दी भई हाल गोंगबु बस्दै आएका ५० वर्षीय खम्म मगर अवकास प्राप्त ब्रिटिस–लाहुरे (ब्रिटिस गोर्खा…